Taliyaha Booliska Soomaaliya Jeneraal Bashiir iyo danjire Keating oo gaaray Gaalkacyo – Puntland Voice
July 22, 2018 6:46 pm Views: 23
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa goordhowayd gaaray wefdi uu hoggaaminayo Taliyaha Booliska Soomaaliya Jen. Bashir Cabdi Maxamed.
Wafdiga Taliyaha Booliska ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Ergeyga gaar ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya danjire Micheal Keating iyo saraakiil ka tirsan Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM.
Booqashada Taliyaha Booliiska iyo ergeyga gaarka ah qaramada midoobay ee Soomaaliya ay ku tageen magaalada Gaalkacyo ayaa lasoo sheegayaa in ay la xiriirto u kuur gelida xaalada ammaan ee magaalada Gaalkacyo iyo indho- indheyn ay ku sameeynayaan taliska ciidanka isku dhafka ee gacanta ku haya xaalada guud ee ammaanka magaaladaasi Gaalkacyo.
Wefdiga ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Gaalakcyo kulamo la qaadan doona maamulka labada dhinac ee magaaladaasi Gaalkacyo iyagoona sidoo kale booqan doona xeryaha ciidamada isku dhafka ay ka dagan yihiin magaalada Gaalkacyo.